टाइम्स स्क्वायरमा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्टहरू यात्रा समाचार
टाइम्स स्क्वायरमा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्टहरू
मारिएला क्यारिल | | Gastronomy, न्यूयर्क
के तपाइँ न्यूयोर्कको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा यो तपाइँको सपना हो र तपाइँ यसलाई साकार गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ? महान! न्यू योर्क संसारमा सब भन्दा राम्रो विश्वव्यापी शहर हो र यसको एशियामा प्रतिस्पर्धा भए पनि मलाई लाग्छ पश्चिममा यो छ को सबै भन्दा राम्रो.
न्यूयोर्कमा रात्रि जीवन उत्तम छ र त्यहाँ धेरै बार, थिएटर, सिनेमाघर, शपिंग मल्ल र सबै प्रकारका रेस्टुरेन्टहरू छन्, त्यसैले तपाईं यहाँ सुत्नुपर्दैन। तपाईं जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ बाहिर खाँदा ठूलो रमाइलो हुन्छ टाइम्समा केहि राम्रा रेस्टुरेन्टहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस् स्क्वायर.
2 ल्याम्ब्स क्लब
3 जैतुन बगैचा
5 एलेनको स्टारडस्ट डिनर
8 शेक शेक
9 डोन एन्टोनियो, पिज्जा
यो न्यू योर्कको कुना हो मिडटाउन म्यानहट्टनमा सडकहरूको हलचल चौराहे: पोइन्ट जहाँ सेभेन्थ एवेन्यूले ब्रडवे एवेन्यू भेट गर्दछ। न्यू योर्कको यो सानो क्षेत्र केहि ब्लाकहरू मिलेर बनेको छ र यो पैदल यात्रा छ जुन कोहीले पनि छुटाउन सक्दैन।
टाइम्स स्क्वायर १ 1904 ०XNUMX देखि यसलाई यस तरीकाले भनिन्छ, Longacre स्क्वायर भनिन्थ्यो, तर प्रसिद्ध अखबार यो न्यूयोर्क टाइम्स त्यो वर्ष उनी नयाँ भवन, टाइम्स बिल्डिंगमा सरे। एउटा चीजले अर्कोमा पुर्‍याउँछ, र आज यसलाई टाइम्स स्क्वायर भनिन्छ।
यहाँ खाने कोठा लेख्नुहोस्:
यो शहरको एक रेस्टुरेन्ट हो जुन उत्तम आन्तरिक डिजाइनको साथ हो, सुरुचिपूर्ण र ग्लैमरस। बार एक अपवादात्मक साइट हो जसमा रातो अपहोल्स्टर्ड अगस्टिन भोजहरू छन् र साथै सन् १ 20 २० को दशकदेखि चुनढुंगाको फायरप्लेस पनि छ।
यसको भान्छाको प्रभारी कला शैली भोजनालयडेको त्यहाँ शेफ जिफ्री जकारियन छ र मेनू छ परिष्कृत भाँडा जस्तै फोइ ग्रास, अखरोट क्रस्ट गरिएको भेडा, पेकन बटर प्रोफाइरोल्स, र उत्तम ककटेलहरू, सबै तपाईंसँग बुधबार राती आइतवार दिउँसो वा बेलुका खाजाको समय ब्रन्चमा जान्छन् भने मात्र लाइभ जाजको साथ।
अवश्य पनि, यो सब भन्दा महँगो एक हो। तपाईं यसलाई १132२ वेस्ट th 44 औं, सेन्टमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने शहरको राम्रो दृश्यको साथ खानुहोस् सडक तहमा, त्यसपछि यो उत्तम स्थान हो। यो वास्तवमा बाट रेस्टुरेन्टहरूको एक श्रृंखला हो इटालियन खाना, Yankee संस्करण। टाइम्स स्क्वायरमा टस्कन शैलीमा सजाइएको तीन-कथा शाखा छ।
मूल्यहरू कम छन्, अंशहरू ठूला छन् र रोटी र सलादसँग टोपी छैन त्यसैले भोका पर्यटकहरूका लागि अद्भुत छ।
यसले क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्दछ र आइतवारदेखि बिहिबार बिहान ११ बजेदेखि ११ बजेसम्म र शुक्रवारदेखि शनिबार बिहान ११ बजेदेखि मध्यरातसम्म खुला रहन्छ। तपाईं त्यहाँ खान सक्नुहुन्छ वा टाढा किन्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइट बाट तपाईं आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक सप्ताहन्तमा जानुहुन्छ, सायद तपाईंले यो गर्नु पर्छ।
यदि जैतुन बगैंचाले यहाँ इटालियन खाना प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्छ कोरियन फूड। BonChon विश्व भर मा सयौं रेस्टुरेन्ट संग एक श्रृंखला हो।
BonChon मसलादार कुखुराको पखेटा, सोया लसुन, किम्ची, र यो जस्तो देखिन्छ कि सबै सबै खानको लागि ठाउँ हो। घर विशेषता ठीक कुखुरा हो: पखेटा, खुट्टा, फिला र कम्बो, सबै प्रयास गर्न।
मूल्यहरु? उदाहरणका लागि, पखेटाको एक सानो भाग (१० टुक्रा) को लागत $ ११.10 $ तर कम्बो (छ वटा पखेटा र th जांघ) को लागत $ १२.।। छ। त्यसोभए त्यहाँ थप विस्तृत डिशहरू छन्, ११.11 for को लागि टेकबोकी, dollars डलरमा तकोयाकी, १ dollars डलरको लागि फ्राइड क्यालमारी, 95 for को लागि उडोन सूप वा १०.3 dollars डलरमा भुटेको चामलको प्लेट।
तपाईले BonChon लाई २०207 W 38 11 सेन्टमा पाउनुहुन्छ यो सोमबार बिहान ११::30० देखि १०::10० बजेसम्म खुल्छ, बिहीबार बिहान ११ बजे, शुक्रवार बिहान १२ बजे बन्द हुन्छ, शनिबार बिहान ११ बजे र आइतवार दिउँसो १०::30० बजे बन्द हुन्छ।
एलेनको स्टारडस्ट डिनर
तपाईं न्यू योर्क बाट उम्कन सक्नुहुन्नaclásico डिनर त्यसोभए यहाँ हामीसँग एउटा छ। यो एउटा १ s s० थीमाधारित रेस्टुरेन्ट एक संग राम्रो न्यू योर्क मेनू: स्यान्डविच, ह्यामबर्गर, पास्ट्रमी, स्मूदी
तर खाना बाहिर वेटरहरू हेर्नको लागि हुन् किनकि उनीहरूले अर्डरहरू वितरण गर्दा उनीहरूले प्रदर्शनमा राख्छन् र गीतहरू धेरै क्लासिक छन्, यो असम्भव छ कि तपाईंलाई एक भन्दा बढि थाहा छैन किनभने उनीहरूले रक गीतहरू र लोकप्रिय फिल्महरू ध्वनि गर्दछन्।
तिनीहरू स्टेजमा गाउँछन्, बन्द हुन्छन् र भाँडा वितरण गर्न जारी राख्छन्। यदि तपाईं केहि फरक चाहनुहुन्छ भने खान र एकै समय मा एक रमाईलो यो साइट हो। यो निश्चित छ कि सबै भन्दा राम्रो खाना छैन जंक फूड नम्र पनि धेरै नराम्रो छैन।
Comida mexiacana धेरै ट्याकोहरू दृष्टिमा र सहरका सब भन्दा राम्रोसँग। क्वाडाडिल्लाहरू र मार्गारीटासले यस मेक्सिकन बिस्ट्रोको सूचीमा थपेको छ जसमा सेता-टेबलक्लोथ टेबलहरू, पर्खालहरूमा स्प्यानिश टाइल र दुई-मंजिला लाउन्ज छन्।
योसँग सुपर पूर्ण इन्टरनेट साइट छ जहाँ उनीहरूले हप्ताको दिनहरू अनुसार मेनू प्रकाशित गर्छन् ताकि तपाईं जानु अघि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू खाजा खाने, रातको खाना र ब्रन्च सप्ताहन्तमा यो बिहान ११::11० देखि सुरु हुन्छ र 30::3० मा समाप्त हुन्छ।
र यदि तपाईंलाई वास्तवमै केहि मनपर्‍यो भने तपाईं पसलबाट रोक्न सक्नुहुन्छ go र dollars5डलरको बिचमा विभिन्न प्रकारका सॉस र भुटेको खोर्साहरू किन्नुहोस्।
हामीले इटालियन, कोरियाली, मेक्सिकन र क्लासिक अमेरिकी खानाको बारेमा कुरा गरेका छौं तर हामीले केहि बढी हराइरहेका छौं त्यसैले यो पालोको पालो हो चीनी भोजन। यसको चाख्नको लागि एउटा रमाईलो ठाउँ हक्कासन हो, लन्डन रेष्टुरेन्टको एक शाखा जुन विश्वभरि छ वटा अन्य व्यक्तिहरू रहेको छ।
खाना क्यान्टोनिज हो र यो थियो मिशेलिन स्थिति पाउन पहिलो चिनियाँ रेस्टुरेन्ट। स्पष्ट, यो सस्तो छैन तर तपाईंले शैम्पेन सॉस र चिनियाँ महको साथ उत्तम भुटेको कोड खानुहुनेछ। र सजावट स्पष्ट सुरुचिपूर्ण छ।
यो महँगो ठाउँ हो जुन साना अंशहरूको सेवा गर्दछ। यदि तपाईं अझै जानुहुन्छ, र तपाईं ब्रन्चको मजा लिन सक्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् मधुरो sum किनभने यस रेस्टुरेन्टलाई जान्नु यो उत्तम कारण हो। यो 311११ पश्चिम rd 43 औं सडकमा छ।
हामी महँगो चीजबाट सस्तोमा जान्छौं। तथाकथित थिएटर जिल्लामा यो साइट हो जुन सेवा गर्दछ धेरै फ्राइजको साथ विशाल बर्गर र तर पनीर र प्याजको साथ पोर्टोबोलो बर्गर शाकाहारीहरु लाई। बियर, वाइन र शीतल पेय पूर्णaसरल, सस्तो र प्रचुर मेनू।
यो सबै २०० 2004 मा फिर्ता मैडिसन स्क्वायर पार्कमा तातो कुकुरको कार्टबाट सुरू भयो, तर टाइम्स स्क्वायरमा यो रेष्टुरेन्ट हो जुनaa१ एभिन्यूमा अवस्थित छ, त्यस एवेन्यूको दक्षिणपश्चिमी कुनामा र th 691 औं सडकहरूमा।
बर्गर, वाइन, बियर, र हट कुकुरहरु सेवा जारी राख्नुहोस् र हप्ताको सात दिन खोल्नुहोस् बिहान ११ बजेदेखि मध्यरात सम्म।
डोन एन्टोनियो, पिज्जा
A एनआईसी मा पिज्जा? हुनसक्छ यो कुनाको तातो कुकुर जत्तिकै क्लासिक हो वा डिनरमा ह्यामबर्गर खानुहोस्। यहाँ तपाईं डन एन्टोनियो मा, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ नेपोलिटन शैली.
त्यहाँ छन् पिज्जा को धेरै प्रकारहरु र यो भनिन्छ कि घर बनाउने मोज्राएला र बुराटा जुन उनीहरू यहाँ बनाउँछन्, घर बनाउँदछन्, न्यु योर्कको सब भन्दा उत्तम हुन्। तपाईं सलाद, क्रोकेट्स र स्पष्ट रूपमा पास्ता खान सक्नुहुन्छ.
अहिले सम्म टाइम्स स्क्वायरमा केहि राम्रा रेस्टुरेन्टहरू छन्, तर अवश्य तिनीहरू केवल एक मात्र छैनन्। तपाईं विश्वभरि खाना खान सक्नुहुनेछ, सत्य यो छ कि सूची अनन्त छ किनकि हरेक विकल्पको (पिज्जा, पास्ता, सुशी, मेक्सिकन, स्पेनिश, रूसी र एक लामो एस्टेरा) का कारण, त्यहाँ थुप्रै उदाहरणहरू छन्।
यो पनि निर्भर गर्दछ कि तपाईं रेस्टुराँमा बस्न चाहानुहुन्छ वा तपाईं सडकमा खान चाहानुहुन्छ, न्यू योर्कको यस क्षेत्रका थुप्रै गाडाहरूमध्ये एउटामा र खानालाई पर्यटक क्लासिकमा परिणत गर्ने पनि, यदि तपाईं रेस्टुरेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि यी मध्ये मैले भर्खर सूचीबद्ध गरेको सबैभन्दा लोकप्रिय छ। तिनीहरूलाई सम्झना छैन!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Gastronomy » टाइम्स स्क्वायरमा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्टहरू
शुभ प्रभात, म नयाँ वर्षको लागि शहरमा छु र म एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खान चाहन्छु जसले मलाई १/१/२०१ on मा ०००:०० बजे बल ड्रप हेर्न मद्दत गर्दछ। ग्रह होलीवोड बन्द हुनेछ। तपाई कुन सिफारिस गर्नुहुन्छ? धन्यवाद!
नारालाई जवाफ दिनुहोस्
क्राकोका लागि यात्रा, शहरमा के हेर्ने
बेलफास्ट मा गर्न को लागी चीजहरु